नेपालीकाे नजरमा माेदीकाे नेपाल भ्रमण, कत्तिकाे सार्न्दभिक ?
बैशाख २०, २०७५ BNNTV
काठमाडाै । अागामी बैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा अाउन लागेका भारतिय प्रधानमन्त्री अाेली सिधै जनकपुर अाउने भएका छन । दुर्इ दिने भ्रमणमा अाउन लागेका माेदी पटनाबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर जनकपुर अाउन लागेका हुन ।
माेदीकाे स्वागतका लागी प्रधानमन्त्री अाेली जनकपुर जाने निश्चित भइसकेकाे जनाइएकाे छ । मोदीको भ्रमण तयारीको निरीक्षण गर्न मंगलबार जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मोदी काठमाडौं नगई सिधै हेलिकप्टरबाट जनकपुर आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । मोदीले पूजाअर्चना गर्ने जानकी मन्दिर र नागरिक अभिनन्दन गरिने बाह्र बिगाहाको स्थलगत निरीक्षणपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले सो जानकारी दिएका हुन्।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृहमन्त्री थापाले माेदीकाे भ्रमण राजनितिक नभर्इ धार्मिक भएकाले उनले पहिले जनकपुर अाउन लागेकाे बताएका छन । माेदी जनकपुर पछि मुक्तिनाथको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेकाे जनाइएकाे छ । यसपालीकाे माेदीकाे नेपाल भ्रमण राजनितिक भन्दा धार्मिक भ्रमण भएकाले काठमाडाै अाउने बित्तिकै मुक्तिनाथकाे दर्शन गर्न जाने बताइएकाे हाे ।
सरकारी पक्षबाट माेदी नेपाल अाउदाँ स्वागतका लागी तिव्र रूपमा तयारी गरीरहँदा नेपाली जनताले भने यसकाे विराेध गरीरहेका छन । नेपाल भ्रमण गर्न लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको खुलेर बिरोध हुन थालेको छ । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु कुनै ठाउँमा मोदी भ्रमणलाई स्वागत गर्न आतुर देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर लेख रचनामार्फत मोदीको नेपाल भ्रमणको विरोध भइरहेको छ ।
तर दुर्इ नम्बर प्रदेशमा भने माेदीकाे स्वागतकाे लागी तिव्र तयारी भइरहेकाे छ । धार्मिक भ्रमणमा अाउन लागेका माेदीका लागी जनकपुरकाे जानकी मन्दिरमा मोदीलाई भान्जालाई जस्तै स्वागत गरिने मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास वैष्णव अभिव्यक्ति दिएका छन । राजनितिक दलका नेताहरूकाे पनि माेदीकाे स्वागतका लागी तत्पर रहेकाे अभिव्यक्तिहरू अाइरहेका छन ।
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताका लागि मधेशवादी दलले आन्दोलन गरिरहेको बेला भारतले केही दिनका लागि संविधान निर्माण स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यो आग्रहलाई स्वीकार नगरी तीन ठूला दलले संविधान जारी गरेपछि भारतले रिसाएर नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर, भारतले यो कुराको पटक–पटक खण्डन गर्दै ‘नाकाबान्दी आफूहरुले नभएर मधेश आन्दोलनका कारण भएको’ उसको तर्क गरेकाे छ । तर नाकाबन्दीकाे बेला दुख भाेगेका कतिपय व्यक्तिले भने माेदीकाे नेपाल भ्रमणलार्इ पटक्कै रूचाएका छैनन ।
कतिपय मानिसहरूले माेदीकाे नेपाल भ्रमण जनकपुरबाट हुनु र भव्य स्वागतमा उत्रिनुलार्इ पनि शंकाकाे दृष्टिकाेणले हेरेकाे पाइन्छ । माेदीकाे नेपाल भ्रमणलार्इ कागलार्इ बेल पाक्याे हर्ष न विष्मात जस्ता टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन ।
तर सामाजिक सञ्जालमा वरिष्ठ पत्रकारदेखि लिएर लेखक, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजिवी, वकिल, साहित्यकार, विद्यार्थी, प्रध्यापक, शिक्षक हरेक व्यक्तिले मोदी भ्रमणको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपयले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर नेपालीलार्इ हदैसम्मकाे दुख दिने माेदीलार्इ नेपाल भ्रमणमा बाेलाउनु समेत उचित नभएकाे टिप्पणी गरेका छन ।
बिबिसी नेपाली सेवाले अाफनाे ट्वीटरमा माेदीकाे नेपाल भ्रमणबारे प्रतिकृया मागेपछि धेरै जनाले अाफनाे विचार व्यक्त गरेका छन । त्यसका अधिकांसले माेदीकाे नेपाल भ्रमणलार्इ नरूचाइएकाे पाइएकाे छ । बिबिसिकाे ट्वीटरमा प्रतिकृया दिएका २५७ जना मध्येमा करीब ९५ प्रतिशतले बिराेध गरेका छन । विशेषगरी नेपालमाथि लगाइएकाे नाकाबन्दि र नेपाली सिमामा भारतले गरीराखेकाे ज्यादतिबारे धेरैले अाक्राेश पाेखेका छन ।
ट्वीटरमा खिलेन्द्र लुइटेलले हातकाे फाेटाे राख्दै लेखेका छन, ‘नेपालमा सम्प्रदायिकता को बिज़ारोपन भैसकेको छ तेस्क़ो मलजल गर्नकालागी यूरोपियन यूनियन र अमेरिकाकोसमेत चासोको झोला बोकेर हुन लागेको भ्रमण मेरोलागी ठीक छैंन र मैले नाकाबंदीको बेला दाऊराचिरदा लागेको चोट कहिलइ भूलने छैंन !!’
त्यस्तै हेमन थापा लेख्छन, ‘बोली र व्यवहार एउटै भए भुकम्पले दिएको घाउको लागि भनेर नाकाबन्दीको मलम सहयोग पठाउने थिएनौँ। अब आउने हो भने नेपालमा ति मलमको अयान्टिडोट् लिएर आउनुहोस। होईन भने नआएको बेस् अझै भुलेको छैन् भुकम्प लगत्तै खुल्ला हृदय बनाएर पठाएको नाकाबन्दीको सहयोगको मलमहरू नेपाली जनताले।’
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टिप्पणी भइरहदाँ कतिपयले माेदीकाे नेपाल भ्रमणलार्इ पहिलाकाे छवि सुधार्ने र नेपाल संगकाे सम्बन्धलार्इ थप सुधार गर्ने माैकाकाे रूपमा पनि हेरेका छन । तर माेदी अाउदाँ नेपालमा सरसफार्इका काम हुने , सडक पेटीहरू रङगिने भन्दै माेदी जहिले नेपाल अाइदिए नि हुने जस्ता व्यङग्य समेत गरेका छन ।
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २०, २०७५११:४१
आज (मे -३) विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा प्रभातफेरी
गोरु चराईरहेकी १६ वर्षीया किशोरीलाई जुद्धबहादुरले पैसा देखाएर बलात्कार गरेपछि…
सर्पको डसाइबाट एकको मृत्यु
चेकजाँचको क्रममा ५ किलो चरेससहित एक भारतीय पक्राउ !
अाज पनि बसेन एकता संयाेजन समितिकाे बैठक
३३ किलाे सुन प्रकरणःअाज ५ जनाकाे बयान लिइयाे